Siza kusuka isazi sezifo zezingane banakekele noma esikoleni: izindlela sokulungiselela, incazelo
abazali abaningi bayazibuza libukeka incwadi evela kudokotela wezingane. Ngokwesibonelo, ensimini noma esikoleni. Futhi ngokuvamile ukuthi le dokhumenti. Eqinisweni, kunzima ukunikeza incazelo eqondile. Ngempela, eRussia kukhona okungenani 2 izinhlobo izitifiketi sezingane ezifunda udokotela. Miphi? Futhi indlela ukuze uzenze? Qonda yonke lena lula kunalokho kubonakala. Ngokwanele ukuze bakwazi ukucela kusengaphambili imithetho esungulwe eRussia.
Kufanele uqale nge idokhumenti ezingabalulekile ekuphileni. Lena incwadi evela kudokotela wezingane noma engadini yesikole, okuyinto ekhishwe emva ekwelapheni ingane. It ukhonza njengelungu isiqinisekiso sokuthi ingane ngokomthetho aphuthelwe ukuqeqeshwa.
It ekhishwe, njengoba kuye kwashiwo, ngemva kokuba ukugula. Ngokuvamile, isitifiketi sinjalo yokukhululeka ukuqeqeshwa ngokomzimba kubafundi. Ungabuza udokotela somntwana isitifiketi bavakashile. Ngo ukuvakashelwa wakhe, isizathu kufanele kubhalwe, kanye usuku ukuvakasha.
Indlela uthole isitifiketi ejwayelekile
ingabe isitifiketi esinjalo kusuka isazi sezifo zezingane ingatholakala kanjani? Lo chwepheshe yokwelashwa engafanele kumele ababemenyelwe endlini futhi umbiko izinkinga zezempilo. Umzali noma ingane umane ucela ukusiza esikoleni / engadini, eyaqinisekisa ukuba semthethweni kohlelo yokuvuma usuku ukuqeqeshwa. Kungashiwo okufanayo kwenziwa ngokwakho ungaveli aphoyintimenti nodokotela onguchwepheshe.
Udokotela wezingane, esikhundleni salokho, kuthatha ifomu siphelile, olubhala ngosuku lokufakwa kwesicelo, zokuqala wengane, kanye izikhalazo futhi uphethwe (uma kungenzeka). Ngaphezu kwalokho, wabeka isignesha futhi isitembu isikhungo sakho sezokwelapha.
Kwezinye izimo, isitifiketi ezifanayo kusukela isazi sezifo zezingane? Njengoba kakade kushiwo, le dokhumenti iyadingeka ngesikhathi yokuvuma amakilasi ezikoleni kanye izinkulisa. Kodwa nini?
Ekusebenteni, imibhalo cwaningo kumele okwethulwa engekho ingane ekilasini izinsuku okungenani 3. Kuze kube yilesi kwanele noma inothi kubazali bakho, noma isixwayiso (ngokukhuluma) kusukela abamele zezomthetho ingane.
Futhi ireferensi ifomu kwamazinga adingekayo esikoleni ngemva kokuba ukugula. Yena, njengoba sekushiwo, iyona yokukhululeka ngokomzimba Ezifundweni. Ngokuvamile ingane ukunikeza 2 amaviki lokuphumula ukubuyisela amasosha omzimba.
Njengoba ibhodi yezokwelapha
Okuthakazelisayo mkhulu omunye ukubhekisela engadini kusukela kudokotela wezingane. Noma esikoleni. It akubalulekile kangako. Into eyinhloko ukuthi umbono kadokotela ku isimo yomntwana ezempilo, okuyinto zafundiswa isikhungo sakho semfundo.
Isitifiketi - lena ikhadi yezokwelapha yangempela. A limelela umagazini lonke A4. It izogcina lonke ulwazi mayelana nesimo yomntwana impilo. It ingatholakala kuphela ngemva Abezokwelapha ekhethekile.
Kodwa kungani idokhumenti ngokuthi ngesitifiketi esivela kudokotela wezingane? Zonke ngenxa yokuthi ifomu asilungile kuze umagazini kuze wezingane inganikezi umbono. Nguye onquma lokho ochwepheshe labetibambile ingane kanye ke unesibopho ukuvuma / non-yokuvuma ingane ukufunda.
Odokotela ngokuba Commission
Njengoba isitifiketi esinjalo kusuka isazi sezifo zezingane ingatholakala enkulisa noma esikoleni? Esimweni sokuqala sizoba ukuqala imvume ngaphambi kokungena zasenkulisa. Ngokuvamile izingane thatha iminyaka engu-3 enkulisa. In the yesibili - eminyakeni 6-7 singacabanga ngomsebenzi omningi wamaphepha odla.
Ukuze aphumelele ngihlolwa for engadini noma esikoleni, futhi uthole isitifiketi isampula esungulwe, udinga ukuvakashela:
Udokotela wezifo zengqondo (hhayi efiselekayo njalo).
Ekugcineni nazo zonke imiphumela izobizwa kudokotela wezingane. Okuhle kunakho konke ukuthi kuyinto yabo ephelele inkomba design yokwamukelwa enkulisa noma esikolweni. Kungenjalo, wabantwana kuyodingeka zize izikhathi eziningana.
Kodwa lokhu kunganele. Ngaphambi kokuba abazali uzonikezwa isitifiketi wezingane (isampuli ifakwe kule-athikili) ngoba yokwemukela wezemfundo, umntwana kuyodingeka ibhekane uchungechunge nokulingwa. I ngqo uhlu efakwe ngochwepheshe. Kodwa ngokuvamile ukuhlukanisa phakathi cwaningo:
ephelele kakhulu segazi;
cwaningo kwegazi glucose;
Kunconywa sokuba luqale ukulungiselela esikoleni noma enkulisa kuyinto nalezi nezinqubo. Kuphela ngemuva kokuthola ukuhlaziya ukudabula Ochwepheshe emincane futhi wezingane. Le nqubo ngeke umsindise isikhathi, amandla nezinzwa.
Abanye bayazibuza ukuthi lapho isitifiketi ovela wezingane yokwemukela wezemfundo. Lo mbhalo ikhishwa ncamashi endaweni efanayo futhi liqinisekisa ukutheleleka yamuva. Okungukuthi, zonke izitifiketi ezikhishwe wezingane izikhungo efanayo.
abazali Modern bakhululekile ukukhetha kahle lapho isicelo. Kuze kube manje, amadokhumenti cwaningo esikhishwe:
Ngo isimo polyclinics zezingane. Udinga uthintane eyinhloko ukunakekelwa wezingane. Nazi yezokwelapha ukuhlolwa luhlolo kanye pass. Mahhala, kodwa inqubo ungase udonse isikhathi esithile.
I zokwelapha yangasese. Ungakwazi ubhalisele kunoma wezingane. Futhi kulezi emitholampilo yangasese bamenyiwe ukuya ikhomishana esikoleni. Vula ihlaziya ngokuvamile kufanele akhokhe ngokwesilinganiso ruble ecishe ibe yizinkulungwane 4-5. Kodwa isitifiketi esikhishwe emahoreni ambalwa.
Uqinisile lapho ukusebenzisa? Kuyinto njalo umzali enquma bona. Into esemqoka ukuthi manje kuyacaca ukuthi kungaba incwadi evela kudokotela wezingane, indlela okubukeka ngayo futhi ngaphansi kwaziphi izimo kungaba wusizo.
Ukuhlolwa kwegazi i-TB: izici, izinhlobo nencazelo
DNA nokwehlukaniswa isidoda
Ukuvuvukala Eustachian ukwelashwa tube nezimbangela
A umucu ubuhlalu: isikimu. Eluka lobuhlalu isithombe
Amakhodi futhi aphambe for Bemisebe 3
Catching carp entwasahlobo: imithetho kanye izimfihlo